Romantic Couple photos of Myanmar popular singer, Thar Soe and Htet Htet Khine | Myanmar Celebrity Couple Photos
Romantic Couple photos of Myanmar popular singer, Thar Soe and Htet Htet Khine
These are romantic and grand engagement party of Myanmar popular singer, Thar Soe and Htet Htet Khine.
Myanmar popular hip hop singer, Thar Soe and Htet Htet Khine (or) Nge Nge have just got engaged last week, 10th January 2009. They held their wonderful engagement party at Trader Hotel, in Yangon. Nge Nge is studying in United States of America and she will go back there after their honeymoon trip. Although, Thar Soe and Nge Nge held grand engagement party, they didn’t announce when they are going to hold wedding ceremony.
Myanmar popular hip hop singer, Thar Soe and Htet Htet Khine
Theory Hip Hopဂီတအဖွဲ့နှင့် နာမည်ကြီးလာပြီးနောက် “ရောသမမွှေ”စီးရီးဖြင့် မြန်မာ့ဂီတလောကတွင် လမ်းသစ်ထွင်ခဲ့သူ သားစိုးတစ်ယောက် စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခဲ့ပြီဟု သိရှိရသည်။ သားစိုး(ခေါ်) စိုးအောင်မွန်နှင့် မထက်ထက်ခိုင်(ခေါ်) ငယ်ငယ်တို့၏ စေ့စပ်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်တွင် ဇန်န၀ါရီလ (၁၀)ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသူလေးဖြစ်ပြီး စေ့စပ်ပွဲပြီးနောက် အမေရိကန်သို့ ပြန်ဦးမည်ဖြစ်သည်။ သားစိုးနှင့် ငယ်ငယ်တို့မှာ Onlineမှတဆင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ စေ့စပ်ပွဲပြီးနောက် သားစိုးတို့စုံတွဲ ဘန်ကောက်သို့ အလည်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ စေ့စပ်ပွဲအား ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာတွင် မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲမည်ကိုတော့ မသိရသေးချေ။
AnonymousSeptember 7, 2009 at 10:38 AMwant to come USAshame on u.u r suck.pussy-holicReplyDeleteAdd commentLoad more...